ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 | 19 ၏စာမျက်နှာ 38 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » ဖေဖေါ်ဝါရီလ (စာမျက်နှာ 19)
WKNO-TV ကို Flexible, NVerzion မှစ. အရွယ်မှာ Automation System ကိုအတူဖိုင်မှတ်တမ်း-အခြေပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာ Modernizes
NVerzion ရဲ့ CLASS အသုံးပြုခြင်းသည် PBS ဘူတာသိသိသာသာလုပ်ငန်းအသွားအလာ efficiency တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ချွေတာသုံးစွဲ SALT LAKE CITY ကုန်ကျခဲ့ရသည် - ဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2015 - NVerzion (R), ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံအလိုအလျောက်များအတွက်ဖြတ်တောက်-အစွန်း tools တွေကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ WKNO ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် -TV, နောဖပြည်၌, Tennessee ပြည်နယ်အတွင်းရှိ PBS ဘူတာရုံ, NVerzion ကနေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အရွယ်မှာအလိုအလျောက်စနစ်အားတပ်ဖြန့်ထားသည်။ NVerzion ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုအဆင့် Automation System ကို ...
AVIWEST ​​နှင့်အတူ User-Generated အကြောင်းအရာ၏ပြင်သစ်တီဗီ Channel ကို TF1 Simplified Delivery
ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 17 - - စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို Saint-GRÉGOIRE, ပြင်သစ်ကနေတဆင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့ မှစ. AVIWEST ​​ရဲ့ DMNG APP နှင့် DMNG မန်နေဂျာ TF2015 ဂျာနယ်လစ် Can မှတ်တမ်းနှင့် transmit ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအသုံးချဖို့ AVIWEST, ဗီဒီယိုအလှူငွေစနစ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ပြင်သစ်တီဗီရုပ်သံလိုင်း TF1 ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေရိုးရှင်းဖို့ဖြေရှင်းချက်င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်း newsgathering (DMNG) ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ...
DMON-16S နှင့် DMON-16SL: ဒဿမဒီဇိုင်းသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းစုံမိသားစုမှနှစ်ဦးကိုဖြည့်စွက်ကိုကြေညာ
DMON-16S နှင့် DMON-16SL လန်ဒန် 17th ဖေဖော်ဝါရီလ 2015: ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်ဒဿမဒီဇိုင်းသည် decimal ဒီဇိုင်းစာနယ်ဇင်းသတင်းအချက်အလက်ဟာသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းစုံမိသားစုမှနှစ်ဦးကိုဖြည့်စွက်ကြေငြာလိုက်သည်ဒဿမဒီဇိုင်းသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းစုံအကွာအဝေးတိုးချဲ့ဖို့နှစ်ဦးကိုအသစ်သောထုတ်ကုန်တွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ DMON-16S (ETA ဧပြီလ): အဆိုပါခရီးဆောင် DMON-16S ထုံးစံအပြင်အဆင်, UMDs, အသံအပါအဝင် 1G / HD ကို / SD ကအဘို့အ SDI နှင့် HDMI output နှင့်အတူ 16 ရုပ်သံလိုင်းမြင်ကွင်းစုံတစ်3ဖြစ်ပါတယ် ...
နီးလ် Cole အရောင်းမြှင့်တင်ရန် Presteigne ပူးပေါင်းမည်
Crawley အနောက် Sussex, 17 ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 - Presteigne အသံလွှင့်အရစ်ကျ၎င်း၏အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်နီးလ် Cole ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ တစ်ဦးကရောင်းအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်သူကစတူဒီယိုထဲမှာအစိုင်အခဲသမိုင်းရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း post, ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းယနေ့ Presteigne ရဲ့ client များရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုနားလည်သည်။ အကြီးအကျယ်အတွက် client များနှင့်အတူ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့အလုပ်လုပ်ကိုင် ...
Forscene 2015 NAB Show ကိုကို Preview - Booth SL5305
Forscene 2015 NAB Show ကိုကို Preview - ထို 5305 NAB ပြရန်မှာ Booth SL2015 အသံလွှင့် & Cable ကို, တားမြစ်ထား IBC2014 မှာထုတ်ဖော်ပြသနှင့်ဒီဇင်ဘာလများတွင်တိုက်ရိုက်သွားလေ၏ခဲ့သောသစ်ကို Forscene, feature ပါလိမ့်မယ်။ ရင်းမြစ်: www.broadcastingcable.com Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
ကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း (BTS) 2015 NAB Show ကိုကို Preview - Booth L29
ကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း (BTS) 2015 NAB Show ကိုကို Preview - Booth L29 Multichannel သတင်းများလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာတိုးတက်ကတိပြုသည်ကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း (BTS) အတွက် ... ရင်းမြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း: www.multichannel.com ထက်တောင်ဦးအပေါ်ကိုကြည့်ပါ ကြောင့် - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
Bittree Inc ကို 2015 NAB ပြရန် - Booth SU9521
Bittree Inc ကို 2015 NAB ပြရန် - Booth SU9521 နှစ်ကြိမ် Triaxial ကြိုးတွေထုတ်လွှင့်ကင်မရာများများအတွက် cabling ၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ဆက်လက်နှင့်များစွာသောအဆောက်အဦးများကဤလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရန် Pre-cabled ပါပြီ။ ရင်းမြစ်: www.twice.com Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် 2015 NAB Show ကိုကုန်ပစ္စည်းကို Preview - Booth N2722 | အသံလွှင့် & Cable ကို
ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် 2015 NAB Show ကိုကုန်ပစ္စည်းကို Preview - Booth N2722 | အသံလွှင့် & Cable ကို .. Related ဆောင်းပါးများ: t.co/Uy3eRO3InT ရင်းမြစ်: www.ooyuz.com Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ
19 ၏စာမျက်နှာ 38«ပထမဦးစွာ...10«1718192021 » 30...နောက်ဆုံး»